China Manifolds orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Cepai
Ny valizy vavahady FC standard dia mifanaraka amin'ny API 6A fanontana farany faha-21, ary mampiasa fitaovana mety amin'ny serivisy H2S araka ny fenitra NACE MR0175.
Kilasin'ny mari-pana: PU
Choke Manifold dia noraisina hanatanterahana ny teknikan'ny tsindry fandanjana vaovao. Ny Choke Manifold dia afaka misoroka ny fandotoana ny sosona menaka ary manatsara ny hafainganan'ny fandavahana sy fanaraha-maso ny fipoahana amin'ny fomba mahomby. Ny choke manifold dia misy valves choke, valves vavahady, fantsom-pifandraisana, fittings, gauge presseur ary singa hafa. CEPAI Drilltech dia mamatsy tsikombakomba isan-karazany amin'ny 2-1 / 16 "~ 4-1 / 16", miaraka amin'ny tsindry miasa 2000PSI ~ 20,000PSI isaky ny API SPEC 16C / 6A.
Vonoy ny Manifolds
Ny famonoana olona dia ilaina amin'ny rafitra fanaraha-maso tsara mba hitrandrahana ranoka fandavahana ao anaty barika fantsakana na atsofohy ao anaty lavadrano ny rano. Izy io dia misy valve check, valves vavahady, gauge presseur ary fantsom-pifandraisana. CEPAI dia mamatsy isan-karazany ny famonoana olona 2-1 / 16 "~ 4-1 / 16", miaraka amin'ny tsindry miasa 2.000PSI ~ 20.000PSI isaky ny API SPEC 16C / 6A.
Fomba fitrandrahana fotaka
Ny fitrandrahana fotaka dia misy valam-potaka, firaisamponan'ny tsindry ambony, firaisana mitambatra avo lenta, tee, fantson-tsindry ambony, kiho, fandrefesana ary fikafika sns. 2.000PSI ~ 10.000PSI isaky ny API SPEC 16C / 6A
Manifolds fitsapana ambonin'ny
Misy ny fanamboarana mahazatra ny hazo fitsapana ambony. Ireo dia matetika misy swab, ambony master, famokarana, ary mamono valves tsipika. Misy ihany koa ny famolavolana miaraka amin'ny valizy ambany ambany ao ambanin'ny fihodinana. Fitsapana ambonin'ilay tany na hazo fidirana an-tsehatra dia avy amin'ny 3 1/16 "ka hatramin'ny 7 1/16" ary 5.000 psi hatramin'ny 15.000 psi (mari-pana hatramin'ny –50 ° F ka hatramin'ny 350 ° F). Ny fanaingoana manokana dia azo alaina ihany koa rehefa mangataka.
Manakorontana ambony ambany & Mamono Manifolds
Amin'ny alàlan'ny fampidirana singa toy ny Choke azo ovaina sy tsara, ny fantsom-pandrefesana Hydraulika, ny API Flanges, ny Hammer Lug Unions, ny API Studded Crosses sy ny Tees, ny Adaptatera, ny Spools, ny Blinds, ny Crossovers ary ny Fittings, ny Choke Control Console, ny Pressure Manifold Pressure avo, ny valves vavahady avo (Valve vavahady Manual sy Hydraulika), Valve plug pressure avo lenta, lakroa sandoka, tee sandoka, kiho lava Radius, fivoriambe notsapaina fanerena, Fittings notsapaina tamin'ny tsindry tsirairay sy valves vavahady, Valesa fotaka, fantsom-baravarankely vita amin'ny hosoka, kitresina, valizy voan'ny teky avo , Valve High Check Pressure, Hammer Union Forged Tees ary elbows miankina amin'ny fampiharana avy amin'ny fananantsika stock stock, CEPAI dia afaka mifehy ny kalitao sy ny fandaharana na dia rafitra sarotra be aza. CEPAI dia dodona ny hiara-hiasa amin'ny mpanjifa hanome vahaolana mety ho an'ny tetik'asa tsirairay. Raha azo ampiharina na hihaona amin'ny takian'ny mpanjifa ary omena alalana feno avy amin'ny manampahefana fahatelo.
Manaraka: LOHATENY FANASITRANA